Rooney oo sharraxay sababta uu Pogba ugu arko inuu yahay ciyaaryahanka ugu fiican Euro 2020 – Gool FM
“Waligey kuma fikirin in Messi uu ka tagi doono Barcelona” – Ronaldinho
Mudada uu maqnaanayo Lukaku oo shaaca laga qaaday… (Imisa kulan ayeey weyn doontaa Chelsea?)
Courtois oo si xiiso leh kaga hadlay El Clásico-da ugu horreysa kaddib bixitaankii Messi
Paul Scholes oo digniin adag u diray Solskjaer kahor kulanka Liverpool
Ancelotti oo sheegay furaha ay Real Madrid kaga guuleysan karto Barcelona kulanka El Clasico
Rooney oo sharraxay sababta uu Pogba ugu arko inuu yahay ciyaaryahanka ugu fiican Euro 2020
Dajiye July 4, 2021
(Yurub) 04 Luulyo 2021. Halyeeyga Manchester United ee Wayne Rooney ayaa aaminsan in khadka dhexe Red Devils iyo xulka qaranka France ee Paul Pogba uu yahay ciyaaryahanka ugu fiican Koobka Qaramada Yurub ee Euro 2020.
Paul Pogba ayaa bandhig fiican kaga soo muuqday xulkiisa qaranka France Koobka Qaramada Yurub ee Euro 2020, kahor inta aysan ku harin wareega 16-ka, kaddib markii ay guuldarro kala kulmeen Switzerland.
Sida uu qoray wargeyska “Sunday Times” ee dalka England Halyeeyga kooxda Manchester United ee Wayne Rooney ayaa wareysi uu bixiyay wuxuu ku sheegay:
“Sida dad badan, waxaan u maleynayay in France ay noqon doonto ku guuleystaha tartanka.”
“Tani waxay ceeb ku ahayd gaar ahaan Pogba, wuxuu ahaa ciyaariyahanka ugu fiican tartanka ilaa ay ka soo haraan, baasaskii uu kula ciyaaray Karim Benzema iyo Kylian Mbappe waxay ahaayeen kuwa layaab leh.”
“Waxaa taasi ka caawisay in N’Golo Kante uu khadka dhexe uu kaga garab ciyaaray, laakiin waxaan u maleynayaa in sababta ugu weyn ee Paul uu si fiican ugu ciyaaray ay ahayd booskiisa.”
“Wuxuu u ciyaarayey si ka qoto dheer sida aan inta badan ku aragno Manchester United, taasna waxay la macno ahayd inuu awood u yeeshay inuu kubadda ku helo meelo kala duwan ee garoonka dhexdiisa ah.”
“Sii Paul waqti iyo boos, wuxuuna leeyahay karti iyo mala awaal uu runti ku dhaawici karo qofka ka soo horjeeda, Mbappe wuu ku xumaa Euro guud ahaan laakiin wuxuu ka qayb qaatay guusha Pogba.”
“Xulalka kasoo horjeeda France waxay ka walwalayeen xawaaraha Mbappe, taasoo ka caawisay Pogba inuu helo boosas yar uu ku ciyaari karo.”
“United-ka, haddii Marcus Rashford uu horumarin karo qaab ciyaareedkiisa isla markaana uu ku dhiirado inuu raaco qaabka Mbappe ee orodka, waxaan u maleynayaa inaad arki doontid Pogba oo sameynaya wax ka badan waxa uu ku sameeyo maaliyada dalkiisa.”
César Azpilicueta oo uga digay saaxiibadiis qaranka Spain, halista uu leeyahay xiddig ka tirsan xulka Talyaaniga
Goormee ayay PSG dhammeystiri doontaa saxiixyada Sergio Ramos, Achraf Hakimi iyo Gianluigi Donnarumma?